Zuva Rakazara Washington DC & Mount Vernon Tour
Grand Tour yeWashington DC & Arlington Cemetery
Customized private nzendo dzeDC
Nzendo dzeDzidzo dzeVadzidzi
Mabhazi nemota dziri Kutengeswa
Iva A DC Tour Guide $100 pasvondo
Kuona Washington DC Tours
Kugamuchirwa kuZohery Tours - Washington DC Tours
Zohery Tours ndeimwe yemakambani anotungamira anopa Washington DC kushanya. Yave iri mubhizinesi kweanoda kusvika makumi matatu kufadza zviuru zvevashanyi vanoshanya kubva kumativi ese epasi. DC iguta rakasarudzika rinoratidzira zvakapfuura zvenyika ino nezvivakwa zvaro zvese zvine nhoroondo yavo.
NeZohery Tours iwe unowana iyo yekupedzisira muDC yekuona rwendo ruzivo. Isu tinokuratidza iwe kupfuura zvivakwa uye zviyeuchidzo zveguta guru renyika. Iwe unotanga rwendo rwenhoroondo panguva yaunoona uko vanogadzira mutemo uye vanozunza guta vanoita zvavanoita. Panodhindwa mari yako. Kwanamata President nevamwe vanoremekedzwa. Iko maVIP anodya kudya kwavo kwemasikati, kana jog, kana kufamba-famba kwekuzorora kwemangwanani.
Zvimwe zvezviratidzo zvikuru zvauchaona parwendo rwedu rweDC ndeizvi: The White House, The US Capitol, The Jefferson Memorial, the Lincoln Memorial, The World War II Memorial, The Martin Luther King Memorial, Union Station nezvimwe zvakawanda...
Kubhurocha rwendo nesu kuchave nzira yako yerwendo kuburikidza nekare uye kudzokera kune yazvino. Kushanya kwedu kunorondedzerwa neanotungamira rwendo anokuudza nyaya dziri kuseri kwenzvimbo dzese dzeguta. Nezvakawanda zvekuongorora uye nguva shoma, takagadzira mapakeji ekushanyira iwe anozokodzera vazhinji. Tine rwendo rwezuva - The Grand Tour yeWashington, DC - uye rwendo rwemanheru - Washington Mushure meRima. Uye kune avo vangade kusiya nzira dzakarohwa, tine sevhisi yekushanya yakavanzika inozogadziriswa zvinoenderana nezvaunoda uye zvaunofarira.
Pinda muchikepe uye iwe uchabatwa kune yedzidzo yezuva rwendo rweDC, rudzi rwenzendo ndangariro huru dzinoitwa.
kubva pa400 block New Jersey Avenue, pakona yeD street NW Washington DC 20001